Ohatrinona ny torimaso lalina sy rem-panahy tokony ho azoko isaky ny alina? - -Kevi-Pitantanana
Ohatrinona ny torimaso lalina sy remy no ilainao isaky ny alina?
Ny maha-zava-dehibe ny torimaso ho an'ny fiainana sambatra sy mahasalama dia tsy azo hamaivanina.
Fantatrao angamba hoe manao ahoana ny mifoha reraka sy miatrika ny andro ao anaty fanjakana toy ny zombie tsy ampy torimaso.
Mafy… tena mafy.
Na izany aza, toerana be olona ity tontolo ity ary toa ny fomba tokana handrosoana - na hanapahana na dia indraindray aza - dia ny mamela ny torimaso ilaina mba hahavitana bebe kokoa.
Mampalahelo fa ny vatan'olombelona dia mila torimaso tsy tapaka sy tsara mba hitazomana ny tenany.
Ny olona iray izay mijaly noho ny fahaverezan'ny torimaso maharitra dia mety hiaina olana ara-pahasalamana fanampiny ara-tsaina sy ara-batana.
Ny tsy fahampian'ny torimaso dia mety hahatonga ny olona iray mikorontana , misy fiatraikany ratsy amin'ny toe-pony sy ny fihetsem-pony, ary manimba ny fahafahany miatrika adin-tsaina sy fahaiza-misaina mitsikera .
Hisy vokany ratsy izany ary hisy vokany ratsy eo aminy lafiny rehetra amin'ny fiainan'ny olona.
Fa matory firy no tena ilainao?
Ny dingana efatra amin'ny torimaso
Ny mpahay siansa dia manasokajy ny torimaso amin'ny dingana efatra izay refesina sy avahana amin'ny fampiasana electroencephalogram (EEG).
Norefesin'izy ireo ny amplitude sy ny hafatr'ireo mpandray anjara natory, ary nampifangaroiny tamin'ny marika biolojika hafa izy ireo mba hamaritana hoe oviana ny saina no mivezivezy amin'ny alàlan'ny torimaso.
Ity no hitan'izy ireo.
Dingana 1 - Torimaso maivana tsy an'ny Rem
Ny dingana 1 no dingana maivana indrindra amin'ny torimaso.
Afaka mifoha mora foana ilay olona ary mivoaka anaty torimaso.
Ny maso dia mihetsika miadana ary miadana koa ny fiasan'ny hozatra.
Amin'ity vanim-potoana ity matetika ny olona miaina fihenan'ny hozatra tsy ampoizina sy ny fahatsapana ny fahalavoana izay mety hanaitra azy ireo.
Dingana 2 - Torimaso maivana tsy an'ny Rem
Rehefa mifindra amin'ny dingana 2 ilay olona dia hijanona ny fihetsika amin'ny mason'izy ireo raha mihisatra kokoa kosa ny onjan'ny ati-doha.
Ny ati-doha dia hamokatra vetivety ny hetsika amin'ny endrika onjam-peo haingana.
Milatsaka ny maripanan'ny tenan'ilay olona ary mihena ny tahan'ny fony rehefa miomana ny tenany hiditra amin'ny torimaso lalina ny vatany.
Dingana 3 - Torimaso lalina tsy miankina amin'ny REM
Dingana 3 no dingana voalohany amin'ny 'Slow Wave Sleep' (SWS), na ny torimaso delta.
Ny torimaso Delta dia nahazo ny anarany avy amin'ireo fambara amplitude avo lenta miaraka amin'ny hafanana miadana fantatra amin'ny hoe onja delta.
Ireo tsingerina ireo dia manome torimaso mampitsahatra indrindra amin'ny dingana rehetra.
Ireo matory madiodio izay tsy mahatratra ireo dingana ireo dia mety hatory mandritra ny alina iray manontolo nefa tsy mahatsiaro ho sasatra na mailo rehefa mifoha . Mety ho sahirana kokoa amin'ny fanombohana ihany koa izy ireo manomboka mifoha.
Ny olona iray amin'ity dingana torimaso ity dia ho sarotra kokoa ny hampiorina azy ary mety hatory amin'ny alàlan'ny tabataba na tabataba mafy ary koa fihetsiketsehana sasany.
Ny olona iray nifoha tamin'ny torimaso Stage 3 dia matetika no miaina fahasarotana ara-tsaina ary hanana fotoana sarotra kokoa hifindrana amin'ny fanjakana mifoha.
Io koa dia ny sehatry ny torimaso izay mety ahitan'ny olona iray zavatra toa ny lambam-pandriana, fampitahorana amin'ny alina, fandehanana matory, na firesahana torimaso.
Ireo fihetsika ireo dia antsoina hoe parasomnias. Matetika izy ireo dia mitranga mandritra ny vanim-potoana izay miova ny ati-doha avy amin'ny torimaso tsy an'ny REM ka hatramin'ny REM.
Nino ny mpahay siansa teo aloha fa vanim-potoana mangina sy mangina amin'ny olona matory io, saingy nivadika ho tsy marina izany.
Ny atidoha dia tena miasa tokoa satria mandeha amin'ny fitazonana sy fanomanana ny vatana amin'ny andro ho avy.
Ny mpahay siansa manao fandinihana momba ny torimaso dia nanapa-kevitra fa tena ilaina tokoa ny matory delta dingana 3. Nahatratra an'ity fehin-kevitra ity izy ireo rehefa nandinika fa ny atidoha dia hiezaka hiverina amin'ny torimaso onja miadana raha tapaka mandritra io dingana io (na dia tsy hahomby foana aza izany).
Ny dingana farany dia torimaso an'ny REM (Rapid Eye Movement). Io ilay dingana anofinofisin'ny olona iray.
Ny olona tsirairay dia manonofy, na dia mety tsy mahatadidy na manana fotoan-tsarotra fatratra aza ny mampatsiahy azy ireo.
Mora kokoa ho an'ny olona mifoha mandritra ny torimaso REM ny mahatadidy ny nofinofiny.
Izy io dia tsy mitovy amin'ny dingana hafa amin'ny torimaso, satria tsy misy mihetsika ny hozatra, tsy ara-dalàna ny fifohana rivotra, fa ny EEG kosa dia mampiseho lamina toa mifoha ilay olona.
Ny fitepon'ny fony sy ny tosidran'ny olona iray dia hitombo matetika rehefa miditra sy mandroso amin'ny torimaso REM izy ireo.
Milaza ny mpahay siansa fa ny paralysis hozatra mandritra ny torimaso REM dia mety ho vokatry ny tombony azo avy amin'ny fivoarana natao mba hitazomana ny olona tsy handratra tena amin'ny hetsika an-tsitrapo rehefa natory.
Mikatona foana ny masony, saingy mihetsika amin'ny lafiny iray izy ireo satria ilay matory dia miaina fihetsiketsehana ao anaty ati-doha ary manonofinofy izay mitranga mandritra io dingana io ihany.
Ny fofonain'ilay olona dia mety ho lasa marivo, haingana ary tsy ara-dalàna.
Fampahalalana bebe kokoa momba ny torimaso ilaina (mitohy etsy ambany ny lahatsoratra):
Zavatra 14 tokony hatao alohan'ny hatory izay hahatonga anao hatory lalina sy hatory
Ny fiantraikan'ny torimaso amin'ny hatsembohana (Sy ny andininy Versa) ary ny zavatra azonao atao momba izany
20 amin'ireo hira tsara indrindra tokony hatoriana: Playlist amin'ny fotoana fatoriana
Ny fizotry ny tsingerin'ny torimaso
Ny tsingerin'ny torimaso dia ny vanim-potoana ilain'ny olona iray hamindrana ny dingana isan-karazany amin'ny torimaso, fa ny olona dia tsy mifindra fotsiny amin'ny dingana 1 mankany amin'ny REM.
Fa kosa, ny tsingerin'ny torimaso antonony dia toa izao: Dingana 1 (hazavana) - Dingana 2 (hazavana) - Dingana 3 (lalina) - Dingana 2 (hazavana) - Dingana 1 (hazavana) - REM.
Ny matory dia miverina amin'ny dingana 1 aorian'ny REM ary manomboka indray ny tsingerina.
Rehefa mandeha ny alina dia handany fotoana bebe kokoa amin'ny torimaso REM ilay olona ary kely kokoa ny fotoana ao amin'ny Dingana 3.
Ny tsingerin'ny torimaso voalohany dia eo amin'ny 70 ka hatramin'ny 100 minitra eo ho eo. Ireto manaraka ireto dia hitombo ny halavany, eo anelanelan'ny 90 ka hatramin'ny 120 minitra isaky ny tsingerina.
Ny salantsalany torimaso dia hiaina tsingerin'ny torimaso telo ka hatramin'ny dimy mandritra ny alina.
Ny tsangambato REM voalohany dia mety ho fohy toy ny folo minitra, fa ny tsingerina manaraka kosa dia maharitra adiny iray.
Ohatrinona ny torimaso lalina sy fy ilainao amin'ny alina?
Ny haben'ny torimaso lalina sy REM ilain'ny olon-dehibe antonony dia manodidina ny 20-25% amin'ny torimaso totalin'izy ireo, miankina amin'ny ora firy no fatoriany.
Amin'ny ora 7, tokony ho 84 ka hatramin'ny 105 minitra izany. Amin'ny ora 9 dia 108 na 135 minitra eo ho eo izany.
Ny olona dia mazàna tsy mitaky torimaso firy rehefa mihalehibe, izay hahatonga izany salanisa izany hiova.
Ny olon-dehibe antonony dia mila torimaso 7-9 ora amin'ny alina. Raha vao mandroboka ambany torimaso 7 ora amin'ny alina ny olona dia manomboka mahatsapa fiatraikany ratsy amin'ny fahasalamany ara-batana sy faharanitan-tsaina .
Ahoana no ahalalako raha ampy torimaso aho?
Ny olon-tsotra dia tokony ho afaka miasa nefa tsy mila torimaso mandritra ny androny.
Ny faharendremana mafy rehefa miasa na mitondra fiara, mila torimaso tolakandro, mahatsapa ho kamo mandritra ny andro, na mihatakataka mandritra ny fanaovana hetsika hafa dia famantarana tsara fa mety tsy ampy torimaso ianao.
Ny olona izay sahirana amin'ny famohazana sy ny fivoahana eo am-pandriana nony maraina na resin-tory ao anatin'ny minitra vitsy aorian'ny fandriana dia mety tsy ampy torimaso ihany koa.
Ny voka-dratsy ateraky ny tsy fahampian'ny torimaso dia maro….
Ny tsy fahampian'ny torimaso dia mampitombo ny fahatsapana fahatsapana, ny mety ho famoizam-po, ny havizanana, ny fahalainana, manimba ny hery fiarovan'ny vatana ary manimba ny fahalalana sy ny fahaizan'ny saina.
Mampitombo ny fahasarotana amin'ny fiatrehana ny adin-tsaina sy ny fitantanana fihetsem-po, mamparefo ny hery fiarovan'ny vatana, manamora ny aretina ara-batana bebe kokoa, mitombo lanja, manavakavaka ary manjavozavo.
Izy io koa dia mampitombo ny mety hisian'ny aretina ara-batana maromaro ao anatin'izany ny homamiadan'ny sasany, diabeta, tosidra ambony ary kapoka.
Ny olona iray tapaka ny torimasony dia tsy hahatratra ny faritra lalina indrindra mamerenana amin'ny laoniny ny torimaso.
Isaky ny mifoha tanteraka ilay olona dia mila manomboka ny tsimbadika manontolo ny atidohany. Ny torimaso tapaka dia ratsy ihany - ary indraindray ratsy kokoa - noho ny tsy torimaso mihitsy.
Izy io dia azo esorina amin'ny tabataba any ivelany, mamela televiziona na mozika mandeha, mari-pana tsy mahazo aina, biby fiompy, ankizy mifoha, na olana ara-pahasalamana manakana ilay olona tsy hahatratra ireo dingana fatoriana lalina sy mamerina amin'ny laoniny izay.
Manan-danja ve izany rehefa matory aho?
Hatreto dia efa niresaka momba ny torimaso lalina tsy misy Fizarana 3 izay mamerina amin'ny laoniny indrindra ary rehefa mandeha ny alina, dia manafoana ity ampahany amin'ny tsingerin'ny torimaso ity noho ny torimaso REM.
Izany dia mety mitantara ny fahendrena taloha izay isaky ny ora torimaso alohan'ny sasakalina dia roa aorian'ny sasakalina.
Na dia tsy tena marina aza (ny refy 2: 1 dia nongotana tamin'ny rivotra manify), ny fotoana alohan'ny hatory dia mety hahasoa amin'ny fahatsapana ho velombelona rehefa maraina.
Ao amin'ny lahatsoratra Time Magazine , Dr. Matt Walker, lehiben'ny Lab Sleep and Neuroimaging ao amin'ny University of California, Berkeley, dia nanolo-kevitra fa ny matory amin'ny fotoana sasany eo anelanelan'ny 8 alina ka hatramin'ny misasakalina dia tokony hanome ny ati-doha sy ny vatana ny torimaso rehetra ilaina 3.
Izany dia satria, hoy ny lahatsoratra, 'Ny fiovana amin'ny torimaso tsy an'ny REM ho an'ny REM dia mitranga amin'ny fotoana sasany amin'ny alina, na rahoviana na rahoviana ianao no matory.'
Saingy misy fiovana tsy azo ihodivirana rehefa manomboka reraka ny olona. Ny sasany dia tena fofona maraina, fa ny sasany vorondolo alina, ary mety hiaina izany fahatsapana torimaso amin'ny fotoana samy hafa izany izy ireo.
Ary ny fotoana fatoriana alohan'ny olona iray dia hiova rehefa mihalehibe izy ireo. Ny ankizy kely dia mila fotoana fatoriana izay aloha be kokoa noho ny olon-dehibe, fa rehefa tonga amin'ny taona oniversite izy ireo dia mety hahita fa tsy mahatsiaro reraka mandra-pahatongan'ny ora sasakalina.
Ankoatra io vanim-potoana io, ny fotoana fatoriana natoron'ny olona iray dia ho lasa aloha kokoa indray.
Eny, eny, tsy maninona izany rehefa matory ianao. Ny tsara indrindra dia hatoky ireo famantarana omen'ny vatanao anao ianao ary hahita ny fotoana mety amin'ny toerana eo anelanelan'ny amin'ny 8 alina ka hatramin'ny misasakalina.
Ny torimaso dia ampahany lehibe amin'ny fitazonana ny fahasalamana ara-batana sy ara-tsaina.
Ataovy lohalaharana izany.
Tena ilaina ny mandany fotoana raha manatona dokotera raha sahirana amin'ny torimaso amin'ny alina.
ny fomba hiatrehana ny maha empath
zavatra hafahafa hatao rehefa mankaleo anao
mpikomy maty nandritra ny 10 taona lasa
mbola miara-miaina ve i dan sy phil
maninona no miverina foana ilay narcissistic ex-ko
ny fomba hanakanana ny eritreritra ratsy hiditra ao an-tsainao